Funda indlela emnandi yokugubha usuku lokuzalwa
Uma uzindla daba, njengoba kumnandi inothi lokuzalwa, ke lesi sihloko kuyoba usizo kakhulu kuwe. Yiqiniso, lolu suku kufanele kube umuntu emnandi. Futhi izivakashi, kanye hero of the isikhathi akufanele miss. Kufanele kube mnandi, amahle ezithakazelisayo, futhi okubaluleke - emnandi. Ungakwazi ukugubha lo mcimbi nemvelo noma ukuya yokudlela, kodwa ngeke kube khona kancane ezithakazelisayo ukugubha lesi senzakalo, base ekhaya. Futhi uma namanje ukudubula ke esikhathini esizayo uzokwazi ukuze ujabulele ukubuka lokhu engavamile, kumnandi futhi ukugujwa yasekuqaleni. Ukuze uqale, ake bayakhohlwa izindaba zabo nezinto ezibakhathazayo abadala eziphonsa emkhathini zemikhosi, have some fun ngayo yonke inhliziyo, futhi ukuzijabulisa. Ngisho noma inkampani uye wabuthela ngempela Wengane, usengakwazi ukudlala imidlalo ezithakazelisayo, ukuthi kuyoba ikhambi lenkinga yakho: indlela emnandi yokugubha ukuzalwa endlini.
Ake uqale nge emncintiswaneni ngokuthi "inkositini". Ukuhola losusa ephepheni bese sihamba umbuthano ngamunye, bonke ukuze Ubhale evesini siyakuhalalisela kuya lokuzalwa. Okokuqala, ungabhala emgqeni wokuqala lonke baqhubeka siyakuhalalisela. umhlanganyeli ngasinye esilandelayo ubhala ivesi elilodwa line, okungcono imvumelwano ke egoba ishidi. Ukuze umdlali elilandelayo Uyabhala umugqa omusha, futhi uye waqhubeka eyolanda imvumelwano umusho umakhelwane ezihlongozwayo. Phela izivakashi wabhala siyakuhalalisela zabo, inkositini ishidi eyayembuleka futhi ehola imizwa ofunda lokhu ODE behlonipha hero of the isikhathi. It kuvela funny kakhulu futhi kuyajabulisa.
Omunye umncintiswano ukusiza lapho zibhekene nomsebenzi njengoba emnandi yokugubha usuku lwakhe lokuzalwa, ngokuthi "ashisayo - abandayo". Yokuqala ephepheni ebhaliwe lokuzalwa imikhonzo. Khona-ke iyasikwa ibe yizicucwana, baphiwa izivakashi ngakho lalicasha izingcezu ekhaya. Uma umfana lokuzalwa - indoda, behambise izingcezu kwabesifazane, futhi okuphambene nalokho. Hero yalesi senzakalo ukuqoqa wonke izingxenye ngoba lokhu kuyodingeka ukuqagela lapho kufihlwe zonke izingcezu. Abahlanganyeli abeme emgceni bese bememeza "hot" noma "abandayo", kuncike ekutheni eduze ekwambulweni lokuzalwa kanjani. Lapho zonke izingcezu ababuthelwa, lowo ngalifihla izincomo, funda usuku lokuzalwa kwakhe.
Kungenzeka ukuba ahlele umncintiswano okuyiwona ngamunye owayekhona uzothola ezinye isikhumbuzo ezihlekisayo, ezifana isibambo ngesimo amaphuzu noma ummese noma enye into. Usuku lokuzalwa umfana ucela isivakashi ngasinye yimuphi umsebenzi, qiniseka ezithakazelisayo futhi kumnandi, futhi izivakashi, esikhundleni salokho, wenziwa, okuyiwona wathola imiklomelo.
Ayikho ezithakazelisayo kancane mncintiswano "Ngikuphi?", Okuzokwenziwa ukusiza ukuxazulula inkinga, indlela emnandi yokugubha usuku lokuzalwa. Ilungu ukanye umhlane wakhe wonke umuntu, futhi wayebaleka ukuze wakhe emuva anezikhala ungcwecwe ngengxube kwakunemibhalo eqoshiwe ezihlukahlukene njengokuthi "Toilet", "esisangulukisayo-up esiteshini" noma yini enye efana naleyo. Bese ucacise imibuzo ehlukahlukene eholela, lapho umdlali kumele ukuqagela okulotshwe ku ilebula.
Uma namanje unqume ukuthi emnandi yokugubha usuku lokuzalwa, qiniseka ukuthi ukudlala izivakashi zakho emdlalweni ngokuthi "Inkomo." Lapha, umdlali uya kubo bonke futhi izama ukubonisa izwi endlebeni yakhe kuhletshwa umhlanganyeli odlule. Bonke abanye bezama ukuchaza izwi. Okunguye owaqala uqagele impendulo efanele, iya maphakathi egumbini esikhundleni isidlali odlule. Manje uzoba ukuzama ukukhombisa izwi endlebeni hleba yakhe umdlali odlule. Lena mnandi kakhulu mnandi umdlalo lapho wonke umuntu bajabulela iqhaza.
game ethokozisayo kakhulu "Isimo". Yena kuzothatha phezu kolwandle zenjabulo futhi kumnandi. Hamba guys, bona esiswini nge Yesigcilikisha tape induku Balloons. Manje ehlakazekile phansi umdlalo. Abadlali kumele goba futhi ukuqoqa wonke okufanayo, ibhola akumele liqhume. Buka le pretty funny.
Kulabo abazi kanjani okuthakazelisayo lizogubha usuku lwayo lokuzalwa, kuyoba umdlalo iyisibusiso real "Thola uswidi." Nakuba neze emncintiswaneni like amantombazane nge makeup. Lapha, plate ugcwele ukhilimu omuncu, futhi Ufaka candy. Futhi umdlali kumele uthole candy kusukela isitsha ngaphandle kokusebenzisa izandla zabo.